बागलुङमा कोरोना संक्रमितको कोठामै डाक्टर छिर्दैनन् – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNepalबागलुङमा कोरोना संक्रमितको कोठामै डाक्टर छिर्दैनन्
बागलुङमा कोरोना संक्रमितको कोठामै डाक्टर छिर्दैनन्
April 9, 2020 Rohit Basnet Nepal, News 0
चैत २७ पोखरा : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएपछि बागलुङ नगरपालिका ४ कुँडुलेकी १९ वर्षीया युवती धौलागिरी अस्पतालमा उपचाररत छिन् ।
अस्पतालको तेस्रो तला बनाइएको आइसोलेन वार्डमा बसेको १२ दिन भइसक्यो । उनलाई बिहीबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टेलिफोन गरी स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिए । अहिले ज्वरो आए नआएको, खोकी लागे नलागेको सोधे र धेरैभन्दा धेरै तातोपानी खान पनि सुझाव दिए ।
कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङ : डाक्टर दिनमा कतिपटक आउनुहुन्छ ?
विरामी : ‘हेर्न आउनु हुन्न । फोन गर्नुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्रीले : कोठामा नै आउनुहुन्न ? विरामी : आउनु हुन्न ।
संक्रमित युवतीका बुवा ऋषिराम सापकोटाले पनि अस्पतालमा उपचाररत छोरीलाई कोरोना संक्रमणले भन्दा एक्लोपनले सताएको अनलाइनखबरलाई बताए । छोरीलाई उधृद्ध गर्दै सापकोटाले भने, ‘दिनको दुई पटक नर्सहरु खाना लिएर आउँछन्, डाक्टरहरु आउँदैनन् । फोनमा के कसो भयो भनेर सोध्छन् ।
सापकोटाले अघि भने, ‘बन्द कोठामा एक्लै बस्नु पर्दा छोरी निकै आत्तिएकी छे । दुई पटक नर्स आउँछन् । यसबाहेक कोठाको भित्ताबाहेक उसले केही देख्न पाउँदिन ।
धौलागिरि अञ्चल अस्पताल, बागलुङका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र विक पोखरेलले भने संक्रमित युवतीलाई भेट्न चिकित्सक नियमित जाने गरेको दाबी गरे । ‘पीपीई लगाएर गएकाले उनले नचिनेको होला’ डा. पोखरेलले भने । by onlinekhabar